Hosea – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Hosea
1:1 Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Hosea, ny zanak'i Bery, tamin'ny andro nanjakan'i Ozia, Jotama, Ahaza, ary Hezekia, mpanjakan'ny Joda, sy tamin'ny andron'i Jeroboama, ny zanak'i Joasy,, mpanjakan'ny Isiraely.
1:2 Ny niandohan'ny ny Tompo niresaka tamin'i Hosea. Ary hoy Jehovah tamin'i Hosea: "Mandehana, ianao maka vady izay efa fijangajangana, ary manao ho anao zanaky ny fijangajangana, satria, amin'ny alalan'ny fornicating, dia hijangajanga ny tany hiala amin'ny Tompo. "
1:3 Dia nivoaka izy ka naka an'i Gomera, zanakavavin'i Diblaima; dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy taminy.
1:4 Ary hoy Jehovah taminy: "Ataovy Jezirela no anarany, satria, nony afaka kelikely, Dia hamangy ny rà nalatsaka tao Jezirela Jeho ny taranak'i, ary hasiako ny fanjakan 'ny mpianakavin' i Isiraely mba hiala sasatra.
1:5 Ary amin'izany andro izany, Izaho hanorotoro ny batery fiarovana, dia ao amin'ny tany lemaka Jezirela. "
1:6 Ary nony afaka kelikely, dia nanan'anaka ravehivavy ka nitera-bavy. Ary hoy izy taminy:: "Antsoy ny anarany, Raha tsy misy famindram-po, fa Izaho tsy hamindrako fo ny taranak'Isiraely, fa hataonay levona hanadino azy ireo.
1:7 Koa raha hamindrako fo ny taranak'i Joda, ary Izaho no hamonjy azy ireo ny Tompo Andriamaniny. Ary tsy hahavonjy azy amin'ny tsipìka sy ny sabatra ary ny ady sy ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly. "
1:8 Ary izy nono azy, izay atao hoe famindram-po tsy. Dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy;.
1:9 Ary hoy izy:: "No anarany, Tsy ny olona, fa ianareo tsy oloko, ary tsy ho anao.
1:10 Ary ny isan'ny zanak'Israely dia ho toy ny fasika any an-dranomasina, izay tsy misy fepetra ary tsy azo isaina. Ary any amin'ny tany izay izany dia hoy izy taminy:, 'Ianao no tsy oloko,'Izany no hitranga: izany dia hoy izy taminy:, 'Hianareo no zanaky ny Andriamanitra velona.'
1:11 Ary ny taranak'i Joda,, ary ny Zanak'Isiraely, dia ho tafangona. Ary hametraka ho azy iray loha, ary hitsangana avy amin'ny tany, fa mafy ny andro Jezirela. "
2:1 "Lazao amin'ny rahalahinao, 'Oloko ianao,'Sy ny anabaviny, 'Efa nahazo famindram-po.'
2:2 Tsarao ny reninao, mpitsara: fa izy tsy vadiko, ary Izaho tsy vadiny. Dia aoka hanaisotra ny fijangajangana tsy ho eo anoloan'ny tavany, ary ny fanitsakitsaham-bady avy eo an-tratrany.
2:3 Raha tsy izany, Mba hampiharihary ny fitanjahany ka nametraka azy toy ny tamin'ny andro tamin'ny fahaterahany, ary mba mampitoetra azy ho toy ny efitra ka nametraka azy ho azo naleha tany, ary mba hampihatra azy amin'ny hetaheta.
2:4 Ary tsy hamindrako fo ny zanany, satria izy ireo no zanaky ny fijangajangana.
2:5 Fa ny reniny no fornicating; izy no torontoronina azy efa nentina ho rava. Fa hoy izy:, 'Handeha aho araka ny tia, Izay manome ahy ny mofo sy ny rano, ny volon'ondriko sy ny rongony, ny menaka sy ny zava-pisotro. '
2:6 Noho io, indro, Aho amin'ny fefy tsilo fa mandehana miaraka, fa Izaho no manodidina azy amin'ny rindrina, ary tsy hahita ny lalan-.
2:7 Ary izy dia hanenjika ny tia, nefa tsy hahazo azy, ary handinidinika azy, fa izy no tsy nahita azy, ary izy hanao hoe:, 'I Handeha hody amin'ny vadiko taloha aho, satria amin'ny lafiny sasany, dia tsara kokoa ho ahy, noho izany ankehitriny. '
2:8 Ary tsy fantany fa Izaho no nanome azy vary sy ranom-boaloboka sy ny diloilo, ary izay nampitombo ny volafotsy sy ny volamena, izay nataony ho an'i Bala.
2:9 Izany no antony, Haveriko, ary izaho dia haka ny zanako-bary amin'ny fotoany sy ny divay amin'ny fotoany, ary hasiako hanafaka ny volon'ondriko sy ny rongony, izay efa nanarona ny henatra.
2:10 Ary ankehitriny, Dia haneho ny fahadalana ny maso lehilahiny izy, ary tsy hisy olona hanafaka azy avy amin'ny tanako.
2:11 Ary hataoko daholo ny fifaliana mba hitsahatra: ny fotoam-pivavahana, ny voaloham-bolana, ny sabatany, ary ny andro firavoravoana daty.
2:12 Ary Izaho hanimba ny voaloboka sy ny aviavy, momba izay hoy izy, 'Ireo valisoa, ahy izy ireo, ny tia no nomeny ahy. 'fa hametraka azy an-tery ala, ary ny biby any an-tsaha handevona azy.
2:13 Ary Izaho ampitondraina azy ny andron 'ny Bala, fa nandoro ditin-kazo manitra izy izay, dia noravahiny ny tenany amin'ny kavina sy ny rojo, ka nandeha nanaraka azy lehilahiny, ka nanadino ny momba ahy,", Hoy ny Tompo.
2:14 "Noho io, indro, Dia mahasarika azy, ary Izaho hitondra azy ho any an-tany foana, fa hiteny ho any am-pony.
2:15 Ary homeko azy, avy amin'ny toerana iray, ny mpamboatra tanim-boaloboka, ary ny lohasaha Akora ho toy ny andinin-tsoratra fanantenana. Ary izy no mihira ao toy ny tamin'ny andro fahatanorany, Sy tahaka ny tamin'ny andro niakarany avy any aminy tany amin'ny tany Egypta.
2:16 Ary amin'izany andro izany,", Hoy ny Tompo, "Fa izy no miantso ahy, 'Ny vadiko,'Ary izy dia tsy miantso ahy, 'Ry Bala.'
2:17 Ary hesoriko ny anaran'ireo Bala avy ny vavany, ary dia tsy hahatsiaro intsony ny anarany.
2:18 Ary amin'izany andro izany, Hamely ny fifanarahana aminy, ny biby any an-tsaha, ary ny voro-manidina, sy ny zavaboary eto an-tany. Ary Izaho hanorotoro ny tsipìka sy ny sabatra, ary izaho dia hamafa ny ady eto an-tany. Ary hataoko aoka hatory tsy manana ahiahy.
2:19 Ary Izaho Hifofo anao ho ahy mandrakizay, ary Izaho Hifofo anao ho Ahy izay marina sy mahitsy, ary ny famindram-po sy ny fangoraham-po.
2:20 Ary Izaho hanambady anareo ho atỳ amiko amin 'ny finoana, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
2:21 Ary izao no hitranga amin'izany andro: Dia hihaino tsara,", Hoy ny Tompo. "Dia hihaino any an-danitra, ary hihaino ny tany.
2:22 Ary ny tany dia mihaino ny vary, ary ny divay, ary ny diloilo; ary ireo dia hihaino Jezirela.
2:23 Ary hamboleko azy ho ahy any amin'ny tany, Ary hamindra fo aminy, na dia efa nantsoina tsy famindram-po.
2:24 Ary dia holazaiko tsy oloko, 'Oloko ianao,'Ka hanao hoe:, 'Ianao no Andriamanitro.' "
3:1 Ary hoy ny Tompo tamiko: "Mandehana indray, sy tia vehivavy, malala ny namana, nefa mpanitsakitsa-bady, fa izany no Jehovah dia tia ny Zanak'Isiraely, nefa mijery ny andriamani-kafa, ary tia ny voan'ny voaloboka. "
3:2 Ary fifanarahana azy volafotsy dimy ambin'ny folo vola madinika, ary ny harona ny vary hordea, ary ny antsasaky ny harona ny vary hordea.
3:3 Ary hoy izaho taminy:, "Ho hiandry ahy nandritra ny andro maro. Tsy hijangajanga, ary ianao tsy ho amin'ny olona. Fa Izaho kosa dia miandry anao. "
3:4 Fa ny Zanak'Isiraely dia hipetraka andro maro tsy hanana mpanjaka, ary raha tsy misy mpitarika, na fanatitra, ary raha tsy alitara, ary raha tsy mpisorona fitafiana, ary tsy misy marika ara-pivavahana.
3:5 Ary rehefa afaka izany, ny Zanak'Isiraely dia hiverina, ka hitady an'i Jehovah Andriamaniny sy Davida mpanjakany, ary ho tora-kovitra eo amin'ny Tompo sy ny hatsaram-pony, amin'ny andro farany.
4:1 Henoy ny tenin 'ny Tompo, zanak'i Isiraely, fa ny Tompo no Mpitsara ny mponina amin'ny tany. Nefa tsy misy fahamarinana, ka tsy misy famindram-po, ka tsy misy fahalalana an'Andriamanitra, amin'ny tany.
4:2 fanendrikendrehana, sy lainga, ary ny famonoana, sy ny halatra, ary ny fanitsakitsaham-bady no nanasaforany, ary ny fandatsahan-dra no nitondra bebe kokoa ny fandatsahan-dra.
4:3 Noho io, ny tany dia hitomany, sy izay rehetra mitoetra ao dia ho reraka, ny biby any an-tsaha sy ny voro-manidina. Ary ny hazandrano any an-dranomasina koa dia tafangona.
4:4 Noho izany, tena, aoka ny tsirairay ary samy tsy mpitsara, ary aoka tsy hisy olona ho voampanga, Fa ny oloko dia efa tahaka ireo izay miteny manohitra ny fisoronana.
4:5 Ary dia ho simba amin'izany andro izany, ary ankehitriny ny mpaminany ho simba aminao. Amin'ny alina, Izaho no nanao ny reninao mba hangina.
4:6 Ny olona efa tonga mangina, satria tsy nahalala. Satria ianao efa nandà ny fahalalana, Handroahako anareo ho; tsy hanao ny andraikitry ny fisoronana ho ahy, ary efa nanadino ny lalàn'Andriamanitrao, ary dia toy izany no hanadino ny zanakao.
4:7 Araka ny habetsahan'ny azy, dia toy izany tokoa no nanotany tamiko. Dia hampodiko ho henatra ny voninahiny.
4:8 Ary handevona ny fahotan'ny oloko, ka manandratra ny fanahiny ho any ny helony.
4:9 Ary, toy izany koa ny vahoaka, toy izany no hatao amin'ny mpisorona; ary hovaliana ny fomba aminy, ary Izaho no hamaly azy noho ny fikasany.
4:10 Ary hihinana izy ireo fa tsy ho voky. Efa nijangajanga, ary tsy nitsahatra. Satria izy ireo nandao ny Tompo, izy ireo dia tsy ho voaro.
4:11 fijangajangana, sy ny divay, sy ny fahamamoana, efa hesoriko tsy ny fony.
4:12 Ny olona nanontany ny hisorohana, ary ny tehiny no efa nanambara ho azy ireo. Fa ny fanahim-fijangajangana no namitaka azy, ary efa fornicating eo anatrehan'ny Andriamaniny.
4:13 Efa namono zavatra hatao fanatitra any an-tampon'ny tendrombohitra sy nandoro ditin-kazo manitra teny amin'ny havoana, ambanin'ny hazo terebinta, ary ny popola, ary ny hazo terebinta, satria ny aloka tsara; noho izany, ny vavy dia manao fijangajangana sy ny vadiny dia ho mijangajanga.
4:14 Tsy handefa ny fahoriana ny zanakareo-vavy, rehefa ho hijangajanga, na eo amin'ny mpivady, raha manitsakitsa-bady izy ireo, satria ny tenanareo dia mifandray amin'ny mpivaro-tena sy efa namono zavatra hatao fanatitra miaraka amin'ny effeminate, ary satria ny olona tsy mahatakatra dia resy.
4:15 Raha manao ny fijangajangana, Isiraely, Aoka ny Joda, fara fahakeliny, tsy manao fahadisoana; ary aza ho vonona mankany Gilgala, na niakatra tany Betavena, ary tsy tokony mianiana, "Raha velona koa Jehovah."
4:16 Fa ny Isiraely efa nania toy ny ombivavy kely mahatsiravina; ankehitriny ny Tompo dia niandrasan'ny azy ireo tahaka ny tanora zanak'ondry eny amin'ny malalaka habakabaky.
4:17 Efraima dia mandray anjara amin'ny fanompoan-tsampy, dia mandefa azy.
4:18 Ny fanasana efa manokana; efa nanao fijangajangana rehefa fijangajangana. Izy tia ny hitondra fahafaham-baraka ny mpiaro.
4:19 Ny rivotra dia nohomboany azy ireo ny elany, ary izy ireo dia ho menatra noho ny zavatra novonoiny hatao fanatitra.
5:1 Henoy izao, mpisorona, ary mihaino, mpianakavin 'i Isiraely, ary mihaino tsara, tranon'ny mpanjaka. Fa misy fitsarana hamely anao, satria efa tonga fandrika hahazoana ireo izay miahy, ary ny fandrika harato izay natondrony manandrify an'i Tabara.
5:2 Ary efa voafitaka niharam-boina tao amin'ny lalina, aza aho ny mpampianatra azy roa.
5:3 Izaho mahalala an'i Efraima, ary ny Isiraely dia tsy takona amiko, Fa ankehitriny dia efa nijangajanga Efraima, ary ny Isiraely efa voaloto.
5:4 Tsy nametraka ny heviny mba hiverina any Andriamaniny, Fa ny fanahim-fijangajangana no ao anatiny ireo, ary tsy fantany ny Tompo.
5:5 Ary ny fireharehan'ny Israely hamaly ny tavany. Ary ny Isiraely indrindra fa Efraima, ho lavon-keloka, ary na dia ny Joda ho lavo aminy.
5:6 Miaraka dia ny ondry aman'osiny sy ny ombiny, izy ireo handeha hitady ny Tompo, Ary dia tsy hahita azy. Efa naka ny tenany hiala aminy.
5:7 Efa nanota tamin'ny Tompo. Fa efa nitoe-jaza lahy izay vahiny. Ary ho levon'ny iray volana azy rehetra ny.
5:8 Feo ny Bugle tao Gibea, ny anjomara in Friendly. Manaova horakora-Betavena, ivohonao, O Benjamin.
5:9 Efraima dia ho foana ny tany amin'ny andro fanitsiana, fa raha afaka ny firenen'Isiraely, Efa nanambara ny finoana.
5:10 Ny mpitarika ny Joda no ho tahaka izay mihevitra ny farany. Eny, handatsaka ny fahatezerako toy ny fampidina rano ambonin'ny.
5:11 Efraima dia maharitra sy mampidi-doza fanendrikendrehana fitsarana tapaka, satria nanomboka hanaraka fahalotoana.
5:12 Ary Izaho ho tahaka ny kalalao an'i Efraima, ary toy ny simba amin'ny taranak'i Joda,.
5:13 Ary hitan'i Efraima ny fahalemena, ary Joda ny gadra. Ary Efraima nankany Assur, ary izy naniraka ny fitarihan'ny mpanjaka. Fa tsy ho afaka manasitrana anareo, sady tsy dia afaka hanafaka anareo avy amin'ny gadra.
5:14 Fa ho toy ny liom-bavy an'i Efraima, ary ho toy ny liona ny taranak'i ho an'ny taranak'i Joda,. Izaho no nisambotra sy mivoaka. Hesoriko, ka tsy misy olona afaka mamonjy.
5:15 Handeha hody any amin'ny fitoerako Aho, mandra-dia hitombo reraka sy hitady ny tavako.
6:1 Amin'ny fahoriany, dia mifohaza aloha ho ahy. Avia, Aoka isika hiverina any amin'ny Tompo.
6:2 Fa efa nahazo antsika, ary Izy ihany no hahasitrana antsika. Izy hamely, ary Izy ihany no hahasitrana antsika.
6:3 Dia hovelominy indray isika rehefa afaka roa andro; amin'ny andro fahatelo dia hatsangany, ka dia velona eo anatrehany. Isika dia hahatakatra, ary hitohy amin'ny, mba ho fantatrareo ny Tompo. Ny fipetrahana toerana efa voaomana tahaka ny fahazavan'ny maraina voalohany, ary ho avy amintsika toy ny tany am-boalohany sy ny fara-orana amin'ny tany.
6:4 Inona no izaho sy ianao, Efraima? Inona no izaho sy ianao, Joda? Ny famindram-po dia toy ny zavona maraina, sy tahaka ny ando mandalo maraina.
6:5 Noho io, Izaho no nanapaka azy eo amin'ny mpaminany, No nentiko namono azy ny tenin'ny vavako; ary ny hevitra no handeha toy ny mazava.
6:6 Fa famindram-po no sitrako fa tsy sorona, ary ny fahalalana an'Andriamanitra mihoatra noho ny sorona dorana.
6:7 anefa izy ireo, tahaka an'i Adama, dia nivadika ny fanekena; in ity, izy ireo no manao ny tsy marina amiko.
6:8 Gileada dia tanànan'ny sampy izay manufactures; izany dia efa Voafingan'ny niakatra araka ny fianakaviany ny fifandraisana.
6:9 Ary, toy ireo izay mandroba amin'ny teny mahay, izy ireo, tamin'ny fiaraha-nioko tamin'ny mpisorona izy, hitondra ny faty ny mpandeha amin'ny fivahinianana masina avy tany Sekema; fa izy ireo no manao asa ratsy.
6:10 Efa hitako ny zavatra mahatsiravina tao amin'ny mpianakavin 'i Isiraely; ny fijangajangana Efraima no ao. Israely dia voaloto.
6:11 fa ianareo, Joda, hametraka ny vokatra ho anao, raha mbola hanova ny fahababoana ny oloko.
7:1 Fony aho mbola vonona-hanasitrana ny Isiraely, ny helok'i Efraima hita, ary ny lolompo an'i Samaria, fa efa mpanamboatra lainga. Ary ny mpangalatra mangalatra avy ao anatin'ny, ny jiolahy avy any ivelany.
7:2 Ary, mba tsy hanao anakampo hoe izy fa Izaho no izay efa niantso an-tsaina ny faharatsiany rehetra: izao ny nataony no manodidina azy. Izany zavatra izany dia efa nitranga eto anatrehako.
7:3 Ary ny mpanjaka dia nifaly noho ny faharatsiany, sy ny mpanapaka dia nifaly tamin 'ny lainga.
7:4 Rehetra izy ireo mpijangajanga; toy ny lafaoro vainafo teo anatrehan'ny Baking, nitsahatra ny tanàna kely talohan'ny masirasira dia nafangaro tamin'ny, mandra-pahazon'ny masirasira azy rehetra.
7:5 Ary tamin'ny andron'ny mpanjakantsika, ny mpitarika vao ho very saina amin'ny divay; izy dia nanatsotra ny tànany tamin'ny olona mamorona teti-tanteraka akory.
7:6 Fa efa nampiasa ny fony, toy ny lafaoro, raha nametraka fandrika ho azy ireo; dia natory nandritra ny alina mofo azy ireo, ary isa-maraina izy dia tezitra toy ny afo mirehitra.
7:7 Izy rehetra ho mahamay toy ny fatana, ary mandevona ny andriambaventiny. Ny mpanjakany rehetra dia lavo. Tsy misy miantso Ahy teo aminy.
7:8 Efraima ny tenany no nifangaro tamin'ny firenena. Efraima dia tahaka mofo, mofo ambany lavenona, izay tsy nivadika ny.
7:9 Lanin'ny vahiny ny heriny, ary izy tsy nahafantatra izany. Sy fotsy volo koa dia efa niparitaka manerana azy, ary Izy no tsy mahalala izany.
7:10 Ary ny avonavon 'Isiraely dia haetry eo anatrehany, fa tsy niverina tamin'ny Tompo Andriamaniny, na efa nitady azy tamin'ny rehetra izany.
7:11 Ary Efraima dia tahaka ny voromailala izay efa voafitaka, tsy misy fo; Fa ireo nanasa amin'i Egypta, dia nandeha ho any amin'ny Asyrianina.
7:12 Ary rehefa hampitoetra avy, Dia hovelariko aminy fandrika haratony. Dia horavako tahaka ny voro-manidina; No handringanako azy ireo araka ny tatitra momba ny fivoriana.
7:13 Loza ho azy ireo, satria efa niala tamiko. Ho levona izy ireo satria efa marin-toetra amiko. Ary nanavotra azy ireo, ka dia lainga no entiny milaza Ahy.
7:14 Ary tsy mitaraina amiko avy ao am-pony, fa midradradradra foana ao am eo am-pandriany. Izy ireo adalan'ny momba ny vary sy ny divay; efa niala tamiko.
7:15 Ary efa nahita fianarana azy, ary efa nanamafy ny sandriny; ary izy ireny hanisy ratsy ahy.
7:16 Ary niverina ka Izy ho tsy misy zioga. Lasa tahaka ny tsipìka manjiona. Ny mpitondra dia lavon-tsabatra noho ny hadalan'ilay ny teniny. Izany no latsany any amin'ny tany Egypta.
8:1 Aoka hisy ny anjomara tany amin'ny tendany, toy ny voromahery eo ny tranon'i Jehovah, ho an'ny olona izay nivadika ny fanekeko sy nandika ny lalàko.
8:2 Ho hiantso Ahy: "Andriamanitro ô, isika, Isiraely, fantatro ianareo. "
8:3 Israely ariana hatsaran-toetra; ny fahavalo dia hahatratra azy.
8:4 Izy ireo no nanjaka, nefa tsy avy tamiko. Mpitarika nipoitra, Ary izaho tsy nahalala azy ireo. Ny volafotsiny sy ny volamenany, no nanaovany an-sampy ho azy, ka mba hiampita.
8:5 ny zanak'omby, Samaria, efa nolavina. Ny fahatezerako no tezitra azy. Mandra-pahoviana no tsy mahavita ny ho voadio?
8:6 Fa avy tamin'ny Isiraely koa mihitsy: ny mpiasa no nanao azy, ary tsy Andriamanitra. Fa ilay ombilahy kelin'i Samaria dia ampiasaina ny webs ny hala.
8:7 Fa izy ireo dia hamafy rivotra sy mijinja ny tafio-drivotra. Tsy manana tahony mafy; ny kiboriny dia tsy hilefitra vary. Fa raha manao vokatra, olon-kafa no hihinana azy.
8:8 Efa nihinana ny Isiraely. Ankehitriny, any amin'ny firenena, dia efa tonga tahaka ny fanaka maloto.
8:9 Fa niakatra ho any Asyria, ny borikidia mandeha irery. Efraima dia nanome fanomezana ho an'ny tia.
8:10 Fa na dia izy ireo no nitondra ny firenena miaraka noho ny vola, ankehitriny, dia hivory azy. Ary dia sasatra vetivety tamin'ny entana ny mpanjaka sy ny mpitondra.
8:11 Fa Efraima alitara maro hanotana, ary ny fitoerana masina no ho tonga fahatafintohinana ho azy.
8:12 Hosoratako ho azy ny be pitsiny lalàna, izay efa tsaboina toy ny olon-kafa.
8:13 Izy ireo niharam-boina ho manolotra, dia immolate nofo sy hihinana, ary ny Tompo, dia tsy sitrako izany. Fa ankehitriny dia tsaroany ny helony, ary Izy no hamaly ny fahotany: dia ho niverina ho any Egypta.
8:14 Ary ny Isiraely Efa nanadino ny Mpanao azy, ary efa nanao Aseraha. Ary Joda nitombo ny tanàna mimanda. Dia handefasako afo ao an-tanànany, ka handevona ny rafitra.
9:1 Aza misafidy ny hifaly, Isiraely; tsy mankalaza tahaka ny vahoaka manao. Fa ianao efa nijangajanga hanohitra Andriamanitrareo; efa tia ny loka eo amin'ny famoloana rehetra ny vary.
9:2 Ny famoloana sy ny diloilo asa fanaovan-gazety dia tsy hahavelona azy, ary ny divay no hamitaka azy ireo.
9:3 Tsy monina any amin'ny tany 'ny Tompo. Efraima dia niverina ho any Egypta, Ary efa nihinana zavatra voaloto any amin'ny Asyrianina.
9:4 Tsy hanatitra ny fanatitra aidina divay ho an'i Jehovah, ka tsy hampifaly azy. Ny fanatitra dia ho toy ny mofo ny mpisaona. Izay rehetra mihinana izany dia ho voaloto. Fa ny mofo dia ny ainy; dia tsy hiditra ao an-tranon'i Jehovah.
9:5 Inona no hataonao amin'ny fotoam-pivavahana, tamin'ny andro firavoravoana 'ny Tompo?
9:6 Fa, indro, efa nampody ny fandravana. Ejipta no hanangona azy ireo; Memfisa no handevina azy. Amiana no handova ny naniry volafotsy; ny Burr ho ao an-trano rantsan-kazo.
9:7 Ireo andro famaliana no tonga; ny andro famaizana eto. Fantaro ity, Isiraely: fa ny mpaminany dia adala, ny ara-panahy lehilahy very saina, noho ny haben'ny helokao sy ny lehibe araka ny fahadalana.
9:8 Ny Mpandinika ny Efraima tao amin'Andriamanitro. Ny mpaminany dia fandriky ny ho rava ny lalany rehetra; adala ao an-trano ny Andriamaniny.
9:9 Efa nanota izy ireo lalina, toy ny tamin'ny andro tany Gibea. Izy dia hotsarovana ny helony, ary Izy no hamaly ny fahotany.
9:10 I nahita ny Isiraely toy ny voaloboka any an-efitra. Tahaka ny voaloham-bokatry ny aviavy, Hitako ny ray amin'ny faran'ny rantsany. Fa niditra tao amin'i Bala-peora, ary efa nisaraka tamin'ny intermingling, ka dia tonga fahavetavetana, toy ny zavatra izay nisafidy ny tia.
9:11 Efraima dia nanenjika indray ny ho voninahiny dia tahaka ny vorona: hatrany am-bohoka, ary hatrany am-bohoka, sy ny kibo.
9:12 Ary na dia tokony mitaiza ny zanany, Indro, hataoko tsy misy ankizy teo amin'ny olona. Eny, ary ny loza ho azy ireo, rehefa efa nihataka taminy.
9:13 Efraima, tahaka ny hahita izany, dia Tyro, nanorina ny hatsaran-tarehy. Ary Efraima no hitarika ny zanany ho faty.
9:14 Omeo azy, Tompo O. Inona ary no homenao azy? Omeo azy ireo ny kibo tsy niteraka, sy ny nono ritra.
9:15 Rehetra ny ratsy no ao Gilgala, fa natao azy ireo teo, in ny fankahalany. Noho ny lolompo ny famoronana, Dia handroaka azy avy any an-tranoko. I intsony hoe fa tiako izy ireo; rehetra, ny mpitarika nisintona.
9:16 Efraima dia namely; ny fakany no mbola maina avy: tsy mety hilefitra izy ireo voany. Ary na dia tokony hanan'anaka, Hotanterahiko ny malala indrindra ny kibo.
9:17 Harian'Andriamanitro izy kely satria tsy nihaino azy; Ka dia ho tonga mpirenireny any amin'ny jentilisa.
10:1 Isiraely dia maitso voaloboka, ny voany no sahaza ho azy. Araka ny habetsahan'ny voany, efa nahamaro alitara; araka ny fahavokarana amin'ny taniny, efa be amin'ny sarin-javatra voasokitra.
10:2 Ny fony no nizarana, ankehitriny dia hiampita ny fizarazarana. Izy no handrava ny sary masina; vao handroba ny fitoera-masinareo.
10:3 Fa ankehitriny dia hanao hoe, "Tsy manana mpanjaka. Fa isika tsy mba matahotra ny Tompo. Ary inona no mpanjaka hanao ho antsika?"
10:4 Miteny ny teny momba ny fahitana tsy misy ilàna azy, ary hamely ny fifanarahana. Ary ny fitsarana dia haniry tahaka mangidy am-bavasa eny an-tsaha.
10:5 Ny mponina any Samaria efa nivavaka ny ombilahy kely Betavena. Fa ny mpiandry ny tempoliny, izay efa niravoravoan'ny noho izany amin'ny voninahiny, ary ny mponina, efa nisaona noho izany satria nifindra niala teo.
10:6 Raha, tokoa, izany ihany koa no nanolo-tena Assur, toy ny fanomezana Noho ny fitarihan'ny mpanjaka, dia hisambotra Efraima fifanjevoana, ary ny Isiraely dia ho menatra noho ny sitrapony.
10:7 Samaria no takiana ny mpanjaka mba handalo, toy ny sombin-javatra eny ambonin'ny rano.
10:8 Ary ny havoana ny sampy, ny fahotan'ny Isiraely, ho voaozona. Ny Burr sy ny tsilo hitsangana noho ny alitarany. Ary dia hilaza amin'ny tendrombohitra, 'Saròny izahay,', Ary amin'ny havoana, 'Mianjerà aminay.'
10:9 Avy andro fony tany Gibea, Efa nanota ny Israely; in ity, dia tafajanona mafy. Tany Gibea ny ady hamely ny zanaky ny ratsy dia tsy hahazo azy ireo.
10:10 Araka ny faniriako, Mba hanariko araka ny azy. Ary ny firenena ho tafangona azy, raha nofaizana izy ireo noho ny helony roa.
10:11 Efraima dia tahaka ny ombivavy kely izay nampianarina ho tia Izay manitsaka ny vary, fa nandalo ny hatsaran 'ny tendany. I hitsangana ny Efraima. Joda hiasa tany; Jakoba dia handrava ny tany ho an'ny tenany.
10:12 Mamafaza ho anareo araka ny rariny, ary ny vokatra eo am-bavan'ny famindram-po; manavao ny fallow tany. Fa ny fotoana dia hitady ny Tompo ny fotoana rehefa ho tonga iza no hampianatra anareo ny rariny.
10:13 Efa Niasa impiety; efa vokatra ratsy; efa nihinana ny vokatry ny lainga. Fa natoky amin'ny lalanao, amin'ny habetsahan'ny harena tsara.
10:14 Ny tabataba dia hitsangana eo amin'ny firenenao. Ary ny manda rehetra dia ho lao, toy ny Salman Noravan'ny an-tranon'i Bala izay nitsara ny andron'ny ny ady, ny reny rehefa tafintohina ny lahy.
10:15 Noho izany no anaovana anareo Betela, eo anatrehan'i feno hasomparana ny faharatsiana.
11:1 Toy ny maraina mandalo, toy izany dia manana ny mpanjakan'ny Isiraely nandalo. Fa ny mbola zaza Isiraely, ary tiako izy; ary hiala tany Egypta ny zanako no niantso.
11:2 Dia niantso azy ireo, ary toy izany koa nony niala teo alohany. Tra-boina izy ireo nanatitra ho an'ireo Bala, ka nanao sorona tamin'ny sarin-javatra voasokitra.
11:3 Ary izaho dia tahaka ny ray nitaiza an'i Efraima. No nitondra azy teo an-tsandriko. Ary tsy fantany fa Izaho no nahasitrana azy.
11:4 Izaho no hitaona azy tamin'ny mahazaka Adama, ny famatoran 'ny fitiavana. Ary Izaho ho azy tahaka ny anankiray izay manangana ny zioga noho ny valanoranony. Ary ho tonga eo aminy ka izany mba hohaniny,.
11:5 Tsy hiverina ho any amin'ny tany Egypta, Ny Asyriana fa ny tenany no ho mpanjaka amin'ny azy, satria tsy vonona ny hiova fo.
11:6 Ny sabatra dia nanomboka tao amin'ny tanànany, ka handevona ny olom-boafidiny ka handevona ny lohany.
11:7 Ary ny oloko dia ela ho an'ny hiverina. Fa ny zioga ho nampanompoany azy ireo, izay tsy halaina.
11:8 Ahoana no hanome ho anareo, Efraima; Ahoana no hiaro anao, Isiraely? Ahoana no hanome ho anareo toy ny ho an'i Adama; no nanendry anao ho tahaka an'i Zeboima? Efa niova ny foko ato anatiko; miaraka miaraka amin'ny nenina, efa nanome fo.
11:9 Tsy hanao zavatra eo amin'ny fahatezerana izay iharan'ny fahatezerako. Dia tsy hiverina mihitsy handringana an'i Efraima. Fa Izaho no Andriamanitra, fa tsy olona, ny Masina eo aminareo, ary tsy handroso eo amin'ny tanàna.
11:10 Dia mbola hanaraka ny Tompo; dia mierona toy ny liona. Fa Izy no mierona, ary ny zanaky ny ranomasina dia hatahotra.
11:11 Ary izy ireo dia manidina toy ny vorona avy any Egypta, ary tahaka ny voromailala avy any amin'ny tany ny Asyrianina. Ary Izaho mandamina azy ao an-tranony, hoy Jehovah.
11:12 Efraima dia nanao fahirano ahy amin'ny fandavana, ary ny taranak'Isiraely amin'ny fitaka. Fa Joda dia nidina ho vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona masina ny finoana.
12:1 Efraima mihinana ny rivotra sy ny hafanana mandoro manaraka; mandritra ny andro dia maro ho lainga sy ny fandozana. Ary efa niditra tao amin'ny fifanarahana tamin'ny Asyriana, ary efa nitondra diloilo ho any Egypta.
12:2 Noho izany, ny fitsarana ny Tompo no momba Joda sy ny famangiana eo Jakoba. Izy no hamaly azy araka ny lalany avy sy araka ny famoronana.
12:3 Ao am-bohoka, dia namingana ny rahalahiny; fa ny tsara vintana, nitari-dalana dia efa 'ny anjely iray.
12:4 Ary naharesy ny anjely iray, fa efa lasa natanjaka. Nitomany izy ka nangataka azy. Nahita azy tao Betela, ary tao no efa nitenenany tamintsika.
12:5 Ary Jehovah, Andriamanitry ny maro, ny Tompo no fahatsiarovana.
12:6 Ary noho izany, tokony niova ho Andriamanitrareo. Tandremo ny famindram-po sy fitsarana, ary manantena Andriamanitrareo foana.
12:7 Kanana, teny an-tanany dia mamitaka mandanjalanja, efa nifidy fiampangana diso.
12:8 Ary Efraima hoe, "Na dia izany aza, Efa manan-karena aho; Dia hitako sampy ho ahy. Ny asa rehetra dia tsy manambara amiko ny heloka izay efa nataony. "
12:9 Sy izaho, Jehovah Andriamanitrao hatrany amin'ny tany Egypta, Na dia izany aza dia hahatonga anao hitoetra an-day, toy ny mandritra ny andro ny andro firavoravoana.
12:10 Ary efa nampilazaina ny mpaminany, ary efa nahamaro ny fahitana, ary efa nampiasa fanoharana ny alalan 'ny tanan' ny mpaminany.
12:11 Raha Gileada, sampy, dia efa mamono zavatra hatao fanatitra omby tany Gilgala-poana. Fa na dia ny alitarany dia ho toy ny manangona eo amin'ilay tany any an-tsaha.
12:12 Jakoba nandositra ho any amin'ny faritr'i Syria, ary ny Isiraely nanompo toy ny vady, ary nanompo ny vady.
12:13 Kanefa amin'ny alalan'ny mpaminany ny Tompo nitondra ny Isiraely nivoaka avy tany Egypta, ka dia nanompo ny mpaminany.
12:14 Efraima no nampahatezitra ahy tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fahoriana mangidy, ary ny ràny dia ho naharesy azy, ary ny Tompo hamaly azy noho ny fahamenarany.
13:1 Raha niteny Efraima, ny horohoro ny Isiraely niditra tao, Ary tafintohina tamin'ny anaran'i Bala, dia maty izy.
13:2 Ary ankehitriny dia hametraka fa izy no manota bebe kokoa. Ary izy nanao ny tenany niampatra sary avy amin'ny Ny volafotsiny, tahaka ny endriky ny sampy; fa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny mpanao asa tanana. Ireo lazao aminy, "Sorona ny olona, ianareo izay mankafy ombilahy kely. "
13:3 Izany no antony, izy ireo ho toy ny rahona maraina, sy tahaka ny ando maraina izay mandalo, toy ny vovoka ao entin'ny tafio-drivotra hiala amin'ny famoloana, ary toy ny setroka avy amin'ny varavarana makarakara.
13:4 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrao hatrany amin'ny tany Egypta, ary tsy ho fantatrao Andriamanitra raha misaraka amiko, ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy ahy.
13:5 Fantatro anareo tany an-efitra, any amin'ny tany irery.
13:6 Araka ny kijana, efa voky ka efa afa-po. Ary efa nanandratra ny fony, ary efa nanadino ahy.
13:7 Ary Izaho ho azy ireo toy ny liom-bavy, toy ny leoparda an-dalana Asyriana.
13:8 Aho hiezaka hitsena azy toy ny orsa izay efa nanendaka ny zanany, ary Izaho kosa nizara hanokatra ny antenatenan'ny ny atiny. Ary handevona azy no tahaka ny liona; ny biby any an-tsaha no hamiravira azy masina.
13:9 Fahaverezana no anao, Isiraely. Ny famonjena antsika dia ato amiko ihany.
13:10 Aiza ny mpanjaka? Ankehitriny, indrindra, aoka hovonjeny ny anao eny amin'izay rehetra tanàna, ary avy amin'ny mpitsara, momba izay nanao hoe:, "Omeo mpanjaka sy mpanapaka."
13:11 Izaho no hanome anareo ny mpanjaka tamin'ny fahatezerako, ary izaho dia haka Azy amin'ny fahatezerany.
13:12 Ny helok'i Efraima, dia voafatotra; ny fahotany dia rotidrotiky.
13:13 Ny fanaintainan'ny hiteraka dia hahatratra azy. Izy no tsy hendry zanaka. Fa ankehitriny, fa tsy hitoetra ho mafy orina mandritra ny fanenenana zanany.
13:14 Dia manafaka azy amin'ny tanan'ny fahafatesana; amin'ny fahafatesana Hovonjeko ho afaka. fahafatesana, Izaho no ho faty. Hell, Izaho ho ny ratra mahafaty. Fampiononana Miafina amin'ny masoko.
13:15 Fa hanao nisara-tsaina rahalahy. Ny Tompo dia hitondra rivo-mahamay, nitsangana avy any an-efitra, Ary hataoko tankina ny renirano, Ary hataoko lao ny loharano, dia ravana rehetra mahafinaritra fanangonana ny zavatra ilaina.
14:1 Aoka Samaria very, satria izy no nampirisika ny Andriamanitra mankany mangidy. Aoka izy ireo ho voan'ny fiadiana, aoka ny zanany madinika horavana, ary aoka ny vehivavy bevohoka dia tapaka roa.
14:2 Isiraely, niova fo ho an'ny Tompo Andriamanitrao. Fa ianao no simba noho ny helony.
14:3 Raiso ireo teny ireo aminao, ary hiverina any amin'ny Tompo. Ka lazao aminy, "Esory ny heloka rehetra ary raiso ny tsara. Ary isika dia hamaly ny ombilahy kely ny molotra.
14:4 Ny Asyriana dia tsy hamonjy antsika; dia tsy hitaingin-tsoavaly. Tsy no holazaintsika intsony, 'Ny asan'ny tanantsika no andriamanitray,'Ho an'ireo izay ao anatinareo no hamindrako fo ny kamboty. "
14:5 Hositraniko ny fanenenana; Izaho ho tia azy tsitrapo. Satria iharan'ny fahatezerako mirehitra efa niala taminy.
14:6 Dia ho tahaka ny ando; Isiraely dia efa miposaka toy ny lisy, ary ny fakany, dia hamelatra ny tahaka ny an'ny hazo sedera any Libanona.
14:7 Ny sampany dia handroso, ary ny voninahiny dia ho tahaka ny hazo oliva, ary ny hanitra ho tahaka ny an'ny hazo sedera any Libanona.
14:8 Izy ireo no hiova fo, nipetraka teo amin'ny alokalony. Ho velona amin'ny vary, ary izy ireo dia Hisandrahaka tahaka ny voaloboka. Ny fahatsiarovana ho tahaka ny divay ny hazo sedera any Libanona.
14:9 Efraima hanao hoe:, "Inona no sampy amiko intsony?"Dia hihaino azy, ary Izaho hampitoetra azy mahitsy toy ny salama ny hazo kesika. Ny vokatra dia efa hita avy amiko.
14:10 Iza no hendry ka hahafantatra izany? Iza no manan-tsaina dia ho fantatro ireo zavatra ireo? Fa ny lalan 'ny Tompo dia mahitsy, ary ny marina no mizotra eny aminy, fa tena, ny mpamadika ho latsaka ao aminy.